Epompo yesilayidi impephele nangaphakathi kukasende njalo kuhlale kuvezwe udaka futhi kufanele kuvikelwe ngokufanele ngokugqokwa. "Ukukhethwa kwempahla yokuhambisa indlwana kanye nezikebhe kubaluleke ngendlela efanayo nokukhethwa kwepompo uqobo!" Kunezimo ezintathu ezihlukile ezakha ukugqoka ku-slu ...
Impeller yirotor, ingxenye ejikelezayo yepompo ye-centrifugal. Izindwangu zangaphambili nezingemuva zinempompo kumaveni okunciphisa ukuphindaphinda futhi ivale ukungcoliswa. Izinsimbi eziqinile nezibunjiwe ze-elastomer ziyashintsha ngokuphelele. Sakaza imicu yempepho akudingi ukufakwa noma amantongomane. Ukusebenza kahle okuphezulu ...
Lapho ushaya ama-slurries alrasive akuwona umbuzo wokuthi uzodinga yini izipele zezikhala zokugqoka kanye nezingxenye zokugqoka - ngumbuzo wokuthi nini. Ngamasistimu ahlanganiswe ngokuphelele nezixazululo zokuhlinzekwa komthombo owodwa senza lula ukusungula, ukusabalalisa kanye nokufakwa kwezingxenye zepompo zensimbi kanye nezikhala zokugcina ...